Weekly Nepali Horoscope साप्ताहिक राशिफल (२०७४ कार्त्तिक २४, शुक्रवार)
Weekly Nepali Horoscope साप्ताहिक राशिफल २०७४, कात्तिक २४ देखि ३० गतेसम्म
मेहनतपूर्वक गरिएको कार्यले उचाइमा पुर्‍याउनेछ । साथीहरूले दिएको सुझावबाट आफ्नो भलाई नै हुनेछ । धैर्य गरे विदेश यात्राको अवसरसमेत जुट्नेछ । आफ्ना सिर्जनशील रचना मन पराउनेहरू बढ्ने छन् । राति सवारी साधन चलाउँदा होसियारी अपनाउनुहोला ।
सभा–सम्मेलनमा सहभागी हुँदा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग परिचित हुँदै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हात पार्न सफल भइनेछ । आर्थिक तथा वैचारिक सद्भाव एवं सहयोग मिल्नेछ । नयाँ कामको थालनी हुनसक्छ । पूर्वको यात्राका क्रममा नीलो रंग प्रयोग गर्न सके नचिताएको परिणाम प्राप्त होला ।
प्रेमिकाको नजर तथा अपेक्षा उपहारप्रति छ । साथीभाइको भावना बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला । बिनाप्रतिस्पर्धा पद–प्रतिष्ठा प्राप्त हुने समय छ । मनोरञ्जक काममा मन खोलेर सरिक भइनेछ । टाढिएका साथीभाइसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुनेछ ।
बाहिरी वातावरणमा रुमल्लिँदा पढाइ लेखाइप्रति त्यति ध्यान नजाला । सोच-विचार नगरी अरूलाई वचन दिँदा प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । कार्य व्यस्तता बढी हुने हुँदा स्वास्थ्यप्रति विशेष ध्यान दिनुहोला । साताको अन्त्यमा भोज-भतेरमा सहभागी हुने निमन्त्रणा पाइनेछ ।
साझेदारीले अप्ठ्यारोमा पार्नुका साथै विवाद बढाउन सक्छ । काममा अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न थप लगानीको आवश्यकता छ । आफन्तहरूप्रतिको विश्वास धोकामा परिणत हुन सक्छ । नयाँ कार्यक्षेत्र पहिचान गर्न सफलता हात पर्नेछ । साताको अन्त्यमा वनभोज तथा भेटघाट आदिमा सरिक भइनेछ ।
आलस्यले दैनिक कार्यतालिकामा फेरबदल ल्याई महत्वपूर्ण कामसमेत ओझेलमा पर्ने सम्भावना छ । रोकिएका काममा पुन: प्रयत्न गर्दा सफलता हात लाग्नेछ । राम्रै आम्दानी हुन केही समय कुर्नुपर्नेछ । साताको उत्तराद्र्धमा हरेक कुरामा सर्तकता अपनाउनुमै आफ्नो भलो छ ।
प्रेमी–प्रेमिकाको भूमिकाका कारण उन्नतिको मार्ग पहिल्याउन सकिनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिनेर विशेष अवसर हात पार्न सकिएला । पिछडिएका वर्ग तथा अपांगहरूलाई सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर्मचारीहरू आफ्नै कमजोरीका कारण विवादमा पर्नेछन् । कार्यक्षेत्रमा संयम अपनाउनुपर्ने समय छ । साताको अन्त्यतिर पारिवारिक खर्चको बोझले आर्थिक भार बढाउनेछ ।
प्रेमको नाटक गरी झुक्याउनेहरूसँग सचेत हुनुपर्नेछ । आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी इनाम प्राप्त गर्न सकिनेछ । मन मिल्ने साथीको सुझावमा मात्र विश्वास गरे पछि परिएला । उथलपुथलपूर्ण पारिवारिक वातावरणबाट मुक्ति पाइनेछ । पीपलको पूजाले मनोकांक्षा पूर्ण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
मित्रको सहयोगबाट हौसला प्राप्त हुनेछ । मनपर्ने उपहार हात लाग्ने सम्भावना छ । आफूसँग भएको क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर जुट्नेछ । अभिभावकबाट प्राप्त सुझावले अधुरा कार्य पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउला । असहज परिस्थतिबाट उम्कन बढी नै खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
प्रेमिकाले घरबाहिर भेट्ने प्रस्ताव राख्नेछिन् । मर्यादा पालन नगर्दा अफिसियल कार्यमा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ । नाफा मूलक व्यवसाय सुरु गर्न साझेदारहरूबीच मत मिल्नेछ । चियोचर्चा गर्नेहरूबाट सावधान रहनुहोला ।
हतारमा गरिएको कार्यले उल्टो परिणाम दिनेछ । काममा धैर्यताको आवश्यकता छ । तत्काल समस्या देखिए पनि सोमबारपछि प्रगतिको मार्ग पहिल्याउन सकिनेछ । सुनौलो रङ्गको प्रयोगले मेहनत खेर जान दिनेछैन । तथ्य कुरा पत्ता लगाई असहज परिस्थतिको सामना गर्न सकिनेछ ।
भ्रमण एवं मनोरञ्जनका निम्ति समय निकाल्दा व्यवसाय ओरालो लाग्नेछ । साथीसंगीहरूको भेलाले तपाईंको नेतृत्व अनुमोदन गर्दै नयाँ व्यवसायको श्रीगणेश गर्ने सम्भावना छ । सवारी साधन चलाउँदा संयम अपनाउनुहोला । पारिवारिक सहयोग प्राप्त गर्न अझ केही समय कुर्नुपर्नेछ ।
- रामप्रसाद सिटौला (फलित ज्योतिष, कान्तिपुर)
- कुन सपनाको फल कस्तो हुन्छ ?
- यी ८ कुरामा ध्यान दिुनुस् घरमा सँधै सुख शान्ति हुन्छ !
- यी सात चिज भुलेर पनि कहिल्यै घरभित्र नराख्नुहोस्, घरमा दरिद्रताको आगमन हुन सक्छ
बार्षिक राशिफल २०७४
पूर्वाद्र्धमा केही उतारचढाव देखिए पनि समग्रमा वर्ष-२०७४ फलदायी रहनेछ । भदौ २१ गतेसम्म व्यवसायिक संक्रमणकाल रहनेछ भने खर्च बढ्न सक्छ । परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि संघर्षले अधिकार एवं प्रतिष्ठा दिलाउनेछ । भदौ २१ देखि फागुन २७ गतेसम्म गुरुको अनुकूलताले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । अध्ययनमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ । नोकरीमा प्रवेश वा पदोन्नतिको योग छ । भाग्यले प्रेमपात्र जुराउनेछ भने प्रेमसम्बन्धले वैवाहिक मार्ग अवलम्बन गर्नेछ । साउन २१ गतेदेखि सुखभावमा राहुको उपस्थितिले परिवारजनमा असमझदारी निम्त्याउन सक्छ । जेठ ६ गतेदेखि मंसिर २१ गतेसम्म कष्टभावमा रहने अढैया शनिले काममा बाधा, मनमा अशान्ति, चोटपटक तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने देखिन्छ । नियमित कालीको आराधना गरी प्रत्येक शनिबार पीपलमा जल चढाउँदा शनिको प्रभाव कम हुनेछ । असार, असोज, माघ र फागुन महिनामा धनलाभ होला । वैशाख, साउन, मंसिर तथा चैत महिना स्वास्थ्यका दृष्ट्रिले प्रतिकूल रहनेछन् ।
बृहस्पतिको अनुकूलताले वर्षको प्रारम्भमा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् । सुरुको मेहनतले वर्षभरि नै लाभ उठाउन सकिनेछ । अध्ययनको सफलताले विदेश जाने अवसरसमेत दिलाउन सक्छ । प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक बन्धनतर्फ अघि बढ्नेछ । नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुने सम्भावना छ । भदौ २१ देखि बृहस्पति शत्रुभावमा जाने हुँदा आफन्तहरूसँग वैरभाव बढ्न सक्छ । साउन २१ गतेसम्म सुखभावमा राहुको उपस्थितिले पारिवारिक वातावरण खलबल्याउन सक्छ । वैशाख र मंसिरपछि कष्टभावमा रहने शनिले विविध समस्या निम्त्याउनुका साथै दु:ख पाइने काम गराउन सक्छ । अत्यधिक खर्चले ऋणभार बढ्न सक्छ । शनिबार पीपलमा जल चढाउनुका साथै काली एवं शनिको आराधना गर्नाले प्रतिकूल समयको सामना गर्ने शक्ति प्राप्त हुनेछ । आफ्ना इष्टदेवको पूजा गरेर रोकिएका काममा पुन: प्रयास गर्दा लाभ हुनेछ । साउन, कात्तिक, फागुन र चैत महिनामा विशेष फाइदा हुनेछ भने वैशाख, जेठ, भदौ र मंसिर महिना प्रतिकूल रहनेछन् ।
घरायसी समस्या निम्तिए पनि समग्रमा यो वर्ष शुभफलदायी रहनेछ । अर्थ उपार्जनका विभिन्न स्रोत जुट्नेछन् भने आवास, भूमि तथा सवारीसुख प्राप्त हुनेछ । प्रेमले वैवाहिक मार्ग अवलम्बन गर्नुका साथै सन्तान सुखको योगसमेत छ । मेहनत गर्दा नोकरीमा प्रवेश वा पदोन्नति हुने सम्भावना छ । भदौ २१ गतेदेखि विद्याभावमा बृहस्पतिको स्थानान्तरणले बौद्धिक क्षमता बढ्नुका साथै अध्ययनमा सफलता प्राप्त हुनेछ । आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ । क्षमता प्रदर्शन गरेरै स्वरोजगार बन्न सफल भइनेछ । रोजगारी वा अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जाने अवसर प्राप्त हुनेछ । वर्षारम्भमा भागबन्डा, साझेदारी जस्ता विषयमा विवाद सिर्जना हुन सक्छ । नीति-नियम पालना नगर्नाले जरिवानामा परिनेछ । वर्षको उत्तराद्र्धमा प्रेमसम्बन्धमा खटपटी सिर्जना हुने देखिन्छ । आफ्ना इष्टदेवताको पूजा-आराधना गर्दा प्रतिकूल समयको प्रभाव कम हुनेछ । वैशाख, भदौ, मंसिर तथा चैत महिना लाभदायक छन् । जेठ, असार, असोज र माघ महिना केही कष्टदायक रहनेछन् ।
ग्रहस्थिति मध्यम फलदायी देखिन्छ । प्रयत्न गर्दा आम्दानीका विभिन्न माध्यम फेला पर्नेछन् । नोकरी तथा राजनीतिमा विशेष पद प्राप्त हुने सम्भावना छ । दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ भने प्रेमसम्बन्धले पनि विवाहरूपी निकास पाउनेछ । विद्यार्थीहरूका लागि वर्षको प्रारम्भ र अन्त्य उपलब्धिमूलक रहनेछ । साउन २१ गते प्रवेश गर्ने राहुको प्रभावले गलत बाटो रोजाउनेछ भने शुभचिन्तकहरूले साथ दिन छोड्नेछन् । भदौ २१ गते गृहभावमा बृहस्पतिको स्थानान्तरणले कामको दायित्व बढाउनेछ । बुद्धि-विवेकले काम लिन नसकिएला । साझेदारीमा विवाद एवं परिवारजनमा असमझदारी बढ्न सक्छ । मंसिरदेखि शनिदेवको अनुकूलताले प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ । व्यापार-व्यवसाय विस्तार हुनेछ । कृषिकर्म र चौपायाबाट प्रशस्त लाभ होला । आफ्ना इष्टदेव, बंगलामुखी भगवती तथा वटुक भैरवको पूजा-आराधना गर्नाले फाइदा मिल्नेछ । वैशाख, जेठ, असोज र पुस महिना फाइदाजनक छन् । असार, साउन, कात्तिक र फागुन महिनामा समस्या सिर्जना हुन सक्छन् ।
बृहस्पतिको प्रभावले वर्षारम्भ उत्साहजनक रहनेछ । इच्छाशक्ति एवं लगनशीलताका कारण बौद्धिक क्षेत्रमा उन्नति हुनेछ । लेखन तथा अभिव्यक्ति कलामा निखार आउनेछ । प्रशंसनीय कामले मान-सम्मान दिलाउनेछ । प्रेमसम्बन्धले विवाहरूपी निकास प्राप्त गर्न सक्छ । व्यवसाय फस्टाउनेछ भने फसेको धनसमेत उठ्न सक्छ । यो वर्ष राहु र शनिको प्रतिकूल प्रभावले समस्यासमेत देखा पर्नेछन् । आफ्नै असंयमित व्यवहारले विवाद निम्त्याउन सक्छ । मनग्गे आम्दानी भए पनि धनसञ्चय गर्न नसकिएला । साउन २१ देखि व्ययभावमा जाने राहुले आकस्मिक खर्च बढाउनुका साथै आर्थिक संकट उत्पन्न गर्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा पनि समस्या सिर्जना हुन सक्छ । जेठदेखि कात्तिकसम्म शनिको अढैयाका कारण परिस्थिति केही कमजोर बन्नेछ । अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइनेछ । मंसिरदेखि स्थितिमा सुधार आउनुका साथै आफन्तहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ । जन्मकुण्डलीमा शनि र राहु कमजोर हुनेहरूले काली र बटुक भैरवको पूजा-आराधना गर्नुहोला । कात्तिक, माघ, जेठ तथा असार महिना लाभदायक रहनेछन् । साउन, भदौ, मंसिर एवं चैत महिना प्रतिकूल हुन सक्छन् ।
वर्षको प्रारम्भमा ग्रहहरू अनुकूल नहुनाले केही समस्या देखा पर्नेछ । पारिवारिक असमझदारीले आफ्नाबाट टाढा पुर्‍याउन सक्छ । काम बिग्रने डरले सताउनेछ भने भैपरी आउने समस्याले खर्च बढाउन सक्छ । साउन २१ गतेदेखि राहुको अनुकूल स्थानान्तरणले स्थितिमा सुधार ल्याउनुका साथै आम्दानीको नयाँ स्रोत जुट्नेछ । भदौ २१ देखि धनभावमा जाने बृहस्पतिले भाग्यलाई बलवान् बनाउनेछ । बिग्रिएको प्रेमसम्बन्ध पुन:स्थापित हुनेछ भने दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ । बौद्धिक अभिव्यक्तिले मानसम्मान दिलाउनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रै उपलब्धि हासिल हुनेछ । नोकरीमा कामको दायित्व बढ्नुका साथै अनुकूल स्थानप्राप्ति हुनसक्छ । धन संग्रहसमेत गर्न सकिनेछ । वैशाख तथा मंसिरपछिका महिनामा सुखस्थानमा अढैया शनिको प्रभावका कारण अशान्ति, स्वास्थ्यबाधा, धनहानि, लाञ्छनाजस्ता समस्या सिर्जना भै मन विचलित बनाउनेछ । जन्मकुण्डलीमा शनि र राहु कमजोर हुनेहरूले काली, बटुक भैरव तथा आफ्ना इष्टदेवको पूजा-आराधना गर्नुहोला । असार, साउन, मंसिर तथा फागुन महिनामा प्रयत्न गरिएका काममा सफलता हात पर्नेछ । वैशाख, भदौ, असोज तथा पुस महिना सामान्य छन् ।
यो वर्ष फलदायी रहनेछ । बृहस्पतिको प्रभावले टाढाको यात्रा, धर्मकर्म वा मंगलकार्यका लागि धन खर्च गरिनेछ । अध्ययन तथा व्यवसायमा भने बाधा सिर्जना हुनेछ । प्रतिकूल स्थानान्तरणले रोजगारीमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । भदौ २१ गतेदेखि जन्मराशिमा बृहस्पतिको आगमनले नोकरी तथा स्थापित व्यवसायमा फाइदा हुनेछ भने परिवारजनमा असमझदारी बढ्न सक्छ । वर्षको मध्यतिर आम्दानी कम तथा खर्च अत्यधिक हुनुका साथै तीव्र आलोचना सहनुपर्ने हुन सक्छ । स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भै आँटेका काममा अवरोध खडा हुने देखिन्छ । अरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन् । प्रेमसम्बन्धमा अवरोध तथा दाम्पत्य जीवनमा मतभेद देखापर्न सक्छ । दीर्घकालीन योजना नहुँदा उपलब्धिबिनै समय व्यतीत हुनेछ । मंसिरदेखि शनिको अनुकूल स्थानान्तरणले स्थितिमा सुधार आउनेछ । प्रतिद्वन्द्वीहरू परास्त हुनुका साथै गुमेको अवसर पुन: प्राप्त हुनेछ । प्रतिकूल समयमा शनिदेवको पूजा-आराधना गर्नुहोला । साउन, भदौ, पुस तथा चैत महिनामा काममा सफलता हात पर्नेछ । जेठ, असोज, कात्तिक तथा माघ महिना स्वास्थ्यका दृष्टिले बाधक रहनेछन् ।
यो वर्ष कामको पूर्णता अनिश्चित भए पनि सुरुको मेहनतले वर्षभरि नै फाइदा दिनेछ । भदौ २१ सम्म बृहस्पतिको अनुकूल प्रभावले अग्रजहरूको सहयोग एवं सद्भाव प्राप्त हुनेछ । मनग्गे अर्थ उपार्जन गर्ने समय छ । प्रशंसनीय कामले थप अवसर जुटाउनेछ । प्रेमको गाँठो कसिनुका साथै समाजसेवा एवं परोपकारी काममा मन जानेछ । भदौदेखि गुरु खर्चभावमा जाने तथा वर्षभरि साढेसात शनिको प्रभाव रहने हुँदाबीच-बीचमा अवरोधको सामना गर्नुपर्ला । काम रोकिनेछ भने अध्ययनमा बाधा सिर्जना हुनसक्छ । ईष्र्या गर्नेहरूले चर्को आलोचना गर्नेछन् । झूटा आरोप, अत्यधिक विलम्ब, आर्थिक कठिनाइ एवं मानहानिको योग भएकाले सावधानी अपनाउनुहोला । देश-विदेशको यात्राका साथै नोकरीमा स्थान परिवर्तन हुने योग छ । विधिपूर्वक शनिको पूजा-आराधना गर्दा प्रतिकूलताबाट जोगिन सकिनेछ । शनिबार पीपलमा जल चढाइ, इष्टदेव एवं काली भगवतीको पूजा-आराधना गर्दा प्रतिकूल समयको प्रभाव कम हुनेछ । वैशाख, भदौ, असोज तथा माघ महिनामा गरिएका प्रयासहरू सकारात्मक रहनेछन् भने असार, कात्तिक, मंसिर तथा फागुन महिना चुनौतिपूर्ण सावित हुनेछन् ।
यो वर्ष बृहस्पतिले विभिन्न अवसर जुटाउने सम्भावना छ । नोकरीमा प्रवेश वा पदोन्नति, व्यापारमा वृद्धि तथा राजनीतिमा आंशिक सफलता प्राप्त हुने योग छ । दोहोर्‍याएर प्रयत्न गर्नुपरे पनि दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनसक्छ । अध्ययनले गति लिनेछ भने व्यवहारिक ज्ञानमा वृद्धि हुनेछ । भाग्यले मन मिल्ने प्रेमपात्र जुराउन सक्छ । कीर्तिमानी काम गर्दै नाम, दाम तथा इनाम हातपार्ने समय छ । देश-विदेश घुम्ने अवसर जुर्न सक्छ । शनिको प्रभावमा घरायसी विवाद चुलिन सक्छ । जन्म समयमा प्रतिकूल शनि हुनेहरूमा अस्वस्थता, झूटा आरोप, धनहानिजस्ता बाधा सिर्जना हुनुका साथै टाउको तथा नसा-जोर्नीमा समस्या देखापर्न सक्छ । साउन २१ गतेदेखि कष्टभावमा जाने राहुले दुर्घटना, चोटपटक, रोग, बिछोड आदि निम्याउने सम्भावना छ । शनि प्रतिकूल हुनेहरूले कालीको आराधना गरी प्रत्येक शनिबार पीपलमा जल चढाउँदा फाइदा हुनेछ । राहु शान्तिका लागि छिन्नमस्ता तथा वटुक भैरवको पूजा गर्नुपर्नेछ । जेठ, असोज, कात्तिक तथा फागुन महिना शुभ रहनेछन् भने साउन, मंसिर, पुस तथा चैत महिना प्रतिकूल हुन सक्छन् ।
विविध अवसरका साथै चुनौतीसमेत देखापर्नेछन् । संघर्ष गर्नुपरे पनि कर्म बलियो छ । बृहस्पतिको अनुकूलताका कारण धर्मकर्म, तीर्थाटन तथा परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ । तपाईंको प्रतिभाको उच्च मूल्यांकन हुनुका साथै सामाजिक ख्याति वृद्धि हुनेछ । धेरैलाई फाइदा हुने काम सम्पादन गर्दै नाम, दाम तथा इनाम कमाउने समय छ । वर्षको मध्यतिर नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुनेसम्भावना छ । व्यापारमा मनग्गे लाभ हुनाले चल-अचल सम्पत्ति जोड्न सकिनेछ । बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्नुका साथै अध्ययनमा प्रगति होला । राहुको प्रतिकूल प्रभावले स्वास्थ्यमा बाधा, दाम्पत्य जीवनमा मतभेद तथा प्रेमसम्बन्धमा खटपटी सिर्जना हुनसक्छ । वैशाखका साथै मंसिरपछिका महिनामा साढेसात शनिको प्रभावले अर्थ अभाव, चोटपटक, शरीरमा कष्ट जस्ता समस्या निम्तिने देखिन्छ । जन्मलग्नमा शनि र राहु प्रतिकूल हुनेहरूले काली, हनुमान एवं वटुक भैरवको उपासना गर्नुहोला । यो वर्ष असार, कात्तिक, मंसिर तथा चैत अनुकूल छन् भने वैशाख, भदौ र पुस महिना प्रतिकूल रहनेछन् ।
सुरुका पाँच महिनामा अधिक खर्च हुनेछ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुका साथै ऋणभारसमेत बढ्न सक्छ । प्रतिकूल स्वास्थ्यका बाबजुद कामको बोझ बढ्नेछ । स्थायी सम्पत्तिमा विवाद सिर्जना हुनुका साथै परिवारजनबाट टाढिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन् । साउन २१ देखि राहुको राशिपरिवर्तनले स्थितिमा सुधार ल्याउनेछ । भदौ २१ देखि भाग्यभावमा बृहस्पतिको स्थानान्तरणले आफ्नो वर्चस्व बढाउनेछ । देश-विदेशको भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । मेहनतले दाम, इनाम एवं प्रतिष्ठा दिलाउनेछ । नोकरीमा प्रवेश पाउने बलियो सम्भावना छ । भाग्यले प्रेमपात्र जुटाउनुका साथै वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने साइत जुर्न सक्छ । वर्षैभरि शनि अनुकूल हुनाले भौतिक सुख-सुविधाको कमी हुनेछैन । व्यापार, नोकरी तथा ठेक्कापट्टाबाट पनि फाइदा हुनेछ । बहुमूल्य धातु, यन्त्र एवं सवारीसाधन प्राप्त हुने सम्भावना छ । यो वर्षको वैशाख, साउन, मंसिर र पुस महिना फाइदाजनक छन् भने जेठ, असोज तथा माघ महिना सामान्य रहनेछन् ।
वर्षको प्रारम्भिक समय र अन्त्य उत्साहजनक रहनेछन् । विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै आय-आर्जनका प्रशस्तै स्रोत फेला पर्नेछन् । व्यवसायमा सोचेजस्तै सफलता हात पर्नेछ । प्रेमको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित हुने समय छ । मेहनतले उत्तम रोजगारी, नोकरीमा प्रवेश वा पदोन्नति दिलाउन सक्छ । विद्यार्थीहरूको तर्कशक्ति वृद्धि हुनेछ । अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेश यात्राको अवसर प्राप्त हुनेछ । राहुको स्थानान्तरणले स्वास्थ्यमा बाधा सिर्जना गर्न सक्छ । गुरुजनसँग असमझदारी बढ्नेछ भने अध्ययनमा लक्ष्य प्राप्त गर्न समस्या पर्नेछ । असोजदेखि फागुनसम्म अत्यधिक खर्च हुनेछ भने व्यवहार चलाउन कर्जा लिनुपर्ने हुनसक्छ । साझेदारीमा झमेला, व्यापारमा हानि तथा नोकरीमा दुर्गम स्थानमा स्थानान्तरण हुन सक्छ । प्रतिकूल समयमा बटुकभैरव एवं बंगलामुखीको पूजा गर्नुहोला । वर्षको अन्त्यमा आफ्नो पहुँच वृद्धि हुनेछ भने सुखद समाचारले आनन्द प्रदान गर्नेछ । आर्थिक रूपमा जेठ, भदौ, पुस तथा माघ महिना फाइदाजनक रहनेछन् । असार, कात्तिक तथा फागुन महिनामा संयमित भएर काम गर्नुहोला ।